Oovimba abagcina iincwadi zeFTSE 100 - Iphepha 2 kwayi 6
Udidi: FTSE 100
I-FTSE 100 (UKX) ifikelela kuMmandla oThengiweyo oPhezulu, inokuphinda iqhubeke ngokuThengisa uxinzelelo
I-FTSE 100 (UKX) unyukele kwinqanaba eliphezulu lama-7223.11. Isalathiso sijongana nokwaliwa kwindawo ephezulu ngoku. Ukuxhathisa ngaphezulu akuzange kwaphulwe ukusukela ngoMeyi. Okwangoku, isalathiso siyawa njengoko sijamelene nokwaliwa. Ngeli xesha, ngoSeptemba 27 uptrend; ikhandlela elibuyise umzimba livavanye i-50% yenqanaba lokubuyiselwa kweFibonacci. Ukubuyiselwa endaweni kubonisa ukuba i-UKX iya kunyuka iye kwinqanaba le-2.0 yokwandiswa kweFibonacci okanye kwinqanaba le-7420.97.
I-UKX ikwinqanaba lama-60 le-Index ye-Relative Strength period 14. Ibonisa ukuba isalathiso sikwi-uptrend zone kwaye singaphezulu komgangatho ophakathi wama-50. Iintsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 ze-SMAs zijike ngokuthe tyaba zibonisa imeko. Ixabiso le-crypto lingaphezulu kwemilinganiselo ehambayo ebonisa ukunyuka okunokwenzeka.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, i-FTSE 100 ikwi-uptrend. Isalathiso siphule ngaphezulu komndilili wokuhamba ukufikelela kwi-7,234 yeedola ephezulu. I-UKX ibuyela emva emva kokwaliwa kokuqala kodwa inyukile yaphinda yenza enye ibuyile. Ngeli xesha, ngo-Okthobha u-18 uptrend; umzimba wekhandlela ovavanywe ngokutsha uvavanye inqanaba lokubuyiselwa kwe-Fibonacci engama-61.8%. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba i-UKX iya kunyuka iye kwinqanaba le-1.618 yeFibonacci eyandisiweyo okanye inqanaba 7338.65.
Isalathiso singaphezulu kwe-80% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Imarike ifikelele kummandla othengwe ngaphezulu. Abathengisi kunokwenzeka bavele ukutyhala amaxabiso ezantsi. Isalathiso sigqithiselwe ngaphezulu kwe-7 ka-Okthobha.
I-FTSE 100 (UKX) ijongene nokwaliwa kwinqanaba lokumelana nentloko. Isalathiso kungenzeka ukuba siwele kwaye siqhubeke noluhlu oluboshwe ngumda ongezantsi koxinzelelo lwentloko. Kwisenzo sexabiso sangaphambili, iinkunzi zeenkomo azikophulanga ukuxhathisa ngaphezulu kwinqanaba lama-7200.
I-FTSE 100 (UKX) yeNgxaki engaphantsi kweNqanaba 7200 yokuXhathisa okungaphezulu, Uptrend akunakulindeleka
I-FTSE 100 (UKX) inyuka ngendlela esecaleni. Imakethi inyukele kwinqanaba le-7146 njengoko ijongene nokwaliwa kwindawo yokumelana. I-UKX ithengise ngaphantsi kwenqanaba le-7200 yokuphikisa ngaphezulu. Ukusukela ngoMeyi, abathengi abasaphulanga ukuxhathisa okungaphezulu. Isalathiso besitshintsha phakathi kwamanqanaba angama-6900 kunye nama-7200.
I-UKX ikwinqanaba lama-56 leNdibaniselwano yamandla ahlobene. Ibonisa ukuba imakethi ikummandla weDowntrend kwaye ingaphezulu komgangatho osembindini wama-50. Ii-SMA zeentsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 zijonge phezulu zibonisa umkhwa. Ixabiso le-crypto lingaphezulu kwemilinganiselo ehambayo ebonisa ukunyuka okunokwenzeka.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, i-FTSE 100 yaphuke ngaphezulu komndilili wokuhamba. I-uptrend ijongene nokuchasana kwinqanaba lama-7150.
Ngeli xesha, ngo-Okthobha u-11 uptrend; umzimba wekhandlela ovavanyiweyo uvavanye inqanaba lokubuyiselwa kwe-Fibonacci eyi-78.6%. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba i-UKX iya kunyuka iye kwinqanaba le-1.272 yolwandiso lweFibonacci okanye inqanaba 7192.83.
I-UKX ingaphezulu kwe-80% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Imarike ifikelele kummandla othengwe ngaphezulu. Nangona kunjalo, i-stochastic ithambeka ngokuthe tye. Isalathiso sizama ukuphinda siqhubeke ngamandla. Iintsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 ze-SMAs zihlehla phezulu zibonisa uptrend.
I-FTSE 100 (UKX) ibithengiswa kwindawo yokuqhubela phambili ngo-Okthobha. Isalathiso sele sinyukele phezulu kodwa iinkunzi zeenkomo kusafuneka zikophule ukuxhathisa okungaphezulu. Ikhefu elingaphezulu kokumelana nentloko liya kukhawulezisa ukunyuka okuya phezulu.
I-FTSE 100 (UKX) ikwiNdlela esecaleni yokuHamba njengeeBulls kunye neebhere ezifikelela kwi-Indecision
I-FTSE 100 (UKX) kukuhamba okubotshwe kuluhlu. Kwiinyanga ezintlanu ezidlulileyo, abathengi basilele ukugcina ixabiso elingaphezulu kwenqanaba lama-7200 ngaphezulu kokunganyangeki. Namhlanje, iibhere ziye zaphuka ngaphantsi kweendawo ezihambayo ezinokuthi zitshintshe isalathiso. Isalathiso sinokuphinda siqale ngokulungiswa ezantsi ukuba ixabiso lisilele ukwaphuka ngaphezulu komndilili wokuhamba.
I-UKX ikwinqanaba lama-44 lesalathiso samandla esihlobo. Ibonisa ukuba imakethi ikummandla weDowndrend kwaye ungaphantsi komgangatho osembindini wama-50. Ii-SMA zeentsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 zithambeka ngokuthe tye zibonisa umkhwa. Ixabiso le-crypto lingaphantsi kwemilinganiselo ehambayo ebonisa ukuwa okunokwenzeka.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, i-FTSE 100 inyukela phezulu kwindlela esecaleni. Isalathiso sithengisa ngaphantsi kwemilinganiselo ehambayo ebonisa ukuba i-UKX inokuqhubeka nokuhla. Ukuqala kwakhona kokunyuka, abathengi kufuneka bagcine ixabiso elingaphezulu kwemilinganiselo ehambayo. Ngeli xesha, ngoSeptemba 23 uptrend; umzimba wekhandlela ovavanywe ngokutsha uvavanye inqanaba lokubuyiselwa kwe-Fibonacci engama-61.8%. Ukubuyiselwa endaweni kubonisa ukuba i-UKX izonyuka iye kwinqanaba le-1.618 yeFibonacci eyandisiweyo okanye inqanaba 7309.27.
I-UKX ingaphezulu kwe-25% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Nangona kunjalo, i-stochastic ithambeka ngokuthe tye. Isalathiso sizama ukuphinda siqhubeke ngamandla. Iintsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 zee-SMA zijike ngokuthe tyaba zibonisa imeko esecaleni.
I-FTSE 100 (i-UKX) inokuthi iboshwe ngeentsuku ezimbalwa. Isixhobo seFibonacci sibonakalise ukunyuka okunokubakho kwinqanaba le-7309 kodwa oku kuya kuxhomekeka kubathengi abaphula uxhathiso kwinqanaba le-7200.
I-FTSE 100 (UKX) Ukuchasana kwamadabi kwinqanaba le-7131, i-Uptrend inokwenzeka
I-FTSE 100 (UKX) yintshukumo ephezulu. Namhlanje, abathengi bayasokola ukophula ukuxhathisa kwinqanaba le-7131. I-UKX iya kuba nokunyuka okukhawulezayo ukuya phezulu ukuba uxhathiso lwangoku luphuliwe. Okwangoku, i-altcoin ijongene nenkcaso kuba i-UKX ifikelele kwingingqi ethengiweyo. Ngeli xesha, ngoSeptemba 23 uptrend; ikhandlela elibuyise umzimba livavanye i-50% yenqanaba lokubuyiselwa kweFibonacci. Inqanaba lokubuyisa libonisa ukuba i-UKX izonyuka iye kwinqanaba le-2.0 yokwandiswa kweFibonacci okanye inqanaba 7359.77.
I-UKX ikwinqanaba lama-53 lesalathiso samandla esihlobo. Ibonisa ukuba imakethi ifikelele kummandla we-bullish kwaye ungaphezulu komgangatho osembindini wama-50. Iintsuku ezingama-21 kunye nee-50 zeentsuku ze-SMA zitshibilika ngokuthe tye zibonisa imeko yangaphambili. Ixabiso le-crypto lingaphezulu kwemilinganiselo ehambayo ebonisa ukunyuka okunokwenzeka.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, i-FTSE 100 inyukela phezulu. I-altcoin ijongene nokuchasana kokuqala kwinqanaba eliphezulu langaphambili. I-crypto inokwenzeka ukuba inyuke njengoko ingaphezulu komndilili ohambayo. Okwangoku, ngoSeptemba 23 ezantsi; umzimba wekhandlela ovavanywe ngokutsha uvavanye inqanaba lokubuyiselwa kwe-Fibonacci engama-38.2%. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba i-UKX iya kunyuka iye kwinqanaba le-2.618 yolwandiso lweFibonacci okanye inqanaba 7395.10.
I-UKX ingaphezulu kwe-80% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Abathengisi kunokwenzeka bavele. Ibonisa ukuba isalathiso sifikelele kummandla othengiweyo wentengiso. Iintsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 ze-SMAs zihlehla phezulu zibonisa uptrend.
I-FTSE 100 (UKX) iphinde yaqalisa kwakhona. Ukunyuka kuyaphazanyiswa kukuchasana kwinqanaba 7131. Ukunyuka kuya kuqhubeka kwakhona ukuba okwangoku kwaphuliwe. Okwangoku, i-altcoin ibuyela umva.
I-FTSE 100 (UKX) yokuqhubela phambili, ngoMeyi inokuPhuka ngaphezulu kweNqanaba 7200
Ukusukela nge-21 kaSeptemba, I-FTSE 100 (UKX) Ebesenza inkqubela phambili. Isalathiso siphule ngaphezulu komndilili wokuhamba. I-UKX iya kuphakama ukuzama ukuphinda uxhathise ngaphezulu kwinqanaba le-7200. Ikhefu elingaphezulu kokuxhathisa ngaphezulu liya kubonisa ukukhawuleza. Ukuhamba okubophelelayo kuya kuqala ukuba ukunganyangeki kwentloko kuhlala kungaphazamiseki.
I-UKX ikwinqanaba lama-51 lesalathiso samandla esihlobo. Ibonisa ukuba kukho ulungelelwaniso phakathi konikezelo kunye nemfuno. Iintsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 zee-SMA zijike ngokuthe tyaba zibonisa imeko esecaleni. Ixabiso lesalathiso lingaphezulu kweentsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 zee-SMAs ezibonisa ukunyuka kwesalathiso.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, i-FTSE 100 inyukela phezulu. Umfutho wokuqhubela phambili uqhekeze ngaphezulu komndilili oshukumayo njenge-rally yesalathiso kwicala elingasentla. Okwangoku, ngoSeptemba 23 ezantsi; umzimba wekhandlela ovavanywe ngokutsha uvavanye inqanaba lokubuyiselwa kwe-Fibonacci engama-61.8%. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba i-UKX iya kunyuka iye kwinqanaba le-1.618 yeFibonacci eyandisiweyo okanye inqanaba 7230.86
Itshathi ye-UKX-2 yeyure
I-UKX ingaphezulu kwe-80% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Ibonisa ukuba isalathiso sifikelele kummandla othengiweyo wentengiso. Iintsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 ze-SMAs zihlehla ezantsi zibonisa ukwehla.
I-FTSE 100 (i-UKX) iqale kwakhona ngamandla njengoko amaxabiso eqhekeka ngaphezulu komndilili ohambahambayo. Ngokokuhlalutya kwesixhobo seFibonacci, i-UKX iya kunyuka iye kwinqanaba le-1.618 yeFibonacci eyandisiweyo okanye inqanaba 7230.86.
I-FTSE 100 (UKX) kulungiso olusezantsi, ifumana inkxaso ngaphezulu kwenqanaba 7000
I-FTSE 100 (UKX) iwile kwinqanaba eliphantsi 6998.00. Ixabiso lesalathiso laqhekeka ngezantsi komndilili wokuhamba. Intsingiselo kukuba i-UKX iya kuqhubeka nokuhla. Ukwehla kwezulu kubangelwe kukungavisisani kwinqanaba le-7200. Namhlanje, i-UKX iqale kwakhona ukunyuka okuphezulu njengenkxaso yangoku. I-FTSE 100 iya kuphinda iqale kwakhona xa abathengi beqhekeza ngaphezulu komndilili wokuhamba. Ukusukela ngoMeyi, ukuxhathisa ngaphezulu kwinqanaba lama-7200 akukophulwa. Ikhefu elingaphezulu kokuxhathisa ngaphezulu liza kwenza ukuba isalathiso siye kwinqanaba eliphezulu le-7450. Nangona kunjalo, intshukumo ebotshelelwe kuluhlu iya kuqhubeka, ukuba ukuxhathisa ngaphezulu kuhlala kungaphuli.
I-FTSE ikwinqanaba lama-44 le-Index yamandla ahlobene. I-UKX ikummandla we-downtrend kwaye iyakwazi ukuwela kwicala elisezantsi. Iintsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 zee-SMA zijike ngokuthe tyaba zibonisa imeko esecaleni.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, i-FTSE 100 isezantsi. Isalathiso siwele kwinqanaba lama-7000 saphinda saqala ukudityaniswa ngaphezulu. Imakethi inyuka ukufikelela kwiindawo eziphakamileyo zangaphambili kodwa ijongene nokwaliwa kwi-SMA yeentsuku ezingama-21. Imakethi iya kuphinda inyukele phezulu xa amaxabiso eqhekeka ngaphezulu komndilili wokuhamba.
Isalathiso siwele ngaphezulu kwe-25% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Oku kuthetha ukuba imarike ikwisantya esiphezulu. Isalathiso kulindeleke ukuba sinyukele kwiindawo eziphakamileyo zangaphambili Iintsuku ezingama-21 kunye nee-50 zeentsuku ze-SMAs zihle ziye ezantsi zibonisa ukwehla.
I-FTSE 100 (UKX) ibikuludwe oluboshwe kwinqanaba lokuhamba ngamanyathelo aliqela. Abathengi kusafuneka bophule uxhathiso oluphezulu kwinqanaba le-7200. Intengiso iya kuqhubeka nokubotshwa ngaphandle kokuba ukuxhathisa ngaphezulu kwaphuliwe.
I-FTSE 100 (UKX) idibanisa ngaphezulu kwenqanaba le-7000, inokuthi iqhubeke kwakhona ne-Uptrend
I-FTSE 100 (UKX) bekukuhambo olubophelelayo kwiinyanga ezine ezidlulileyo. Abathengi basilele ukutyhala i-UKX ngaphezulu kwenqanaba le-7200 yokuxhathisa. Kwezi ntsuku zintathu zidlulileyo, isalathiso besiwa emva kokwaliwa kwindawo yokumelana ne-7200. Isalathiso siza kuphinda sinyuke emva kokuba i-UKX iwele kwinqanaba 6860 okanye 6980. Le nto ibisenziwa ngexabiso ukusukela ngoMeyi. Okwangoku, imarike iwela kwinqanaba eliphantsi kwinqanaba le-6980.
I-UKX ikwinqanaba lama-40 lesalathiso samandla esihlobo. Ibonisa ukuba imakethi ikummandla weDowntrend kwaye iyakwazi ukuwela kwicala elisezantsi. Iintsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 ze-SMAs zijike ngokuthe tyaba zibonisa imeko esecaleni. Ixabiso liphulwe ngaphantsi kwemilinganiselo ehambayo ebonisa ukuba ukuthengisa uxinzelelo kunokuqhubeka kwicala elisezantsi.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, i-FTSE 100 isezantsi. Isalathiso sijongane nokugatywa kabini kule ndawo iphakamileyo yakutshanje njengoko ii-altcoins zehle zaya kwinqanaba eliphantsi elingaphezulu kwama-7000. Okwangoku, nge-7000 kaSeptemba yedowntrend, umzimba wekhandlela obuyiselweyo uphinde wavavanya inqanaba lokubuyiselwa kwe-Fibonacci engama-8%. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba i-UKX iza kuwa kwinqanaba le-61.8 yeFibonacci eyandisiweyo okanye inqanaba le-1.618. Ukusuka kwinqanaba lentengo, isalathiso siwele kwinqanaba le-6983.73.08 saphinda saqala ukuya phezulu. Imarike kulindeleke ukuba inyuke.
Isalathiso siwele ngezantsi kwe-20% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla.
Oku kuthetha ukuba intengiso ifikelele kummandla ogqithileyo. Silindele ukuba abathengi bavele kwindawo ethe kratya kwintengiso. Iintsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 ze-SMAs zihlehla ezantsi zibonisa ukwehla.
I-FTSE 100 (UKX) ihamba ecaleni. Okwangoku, i-UKX inokwenzeka ukuba inyukele phezulu njengoko isalathiso sibonakala ngaphezulu. Ukuqhubela phambili ezantsi akunakulindeleka.
I-FTSE 100 (UKX) ikwiNdawo esecaleni yokuHamba, ilwa neNkcaso kwiNqanaba 7151
I-FTSE 100 (UKX) kukunyuka okuphezulu. Isalathiso senza uhlaziyo olutsha. I-uptrend ngoku ijongene nokuchasana kwinqanaba eliphezulu le-7151. Ukunyuka okuphelileyo kuyekisiwe njengoko intengiso iqala kwakhona ukuhamba ecaleni. Ukunyuka kuya kuqhubeka kwakhona ukuba amaxabiso ayaphula ukuxhathisa kwinqanaba le-7151. Ngeli xesha, ngoSeptemba 1 uptrend, umzimba wekhandlela obuyiselweyo uphinde wavavanya inqanaba lokubuyiselwa kwakhona kweFibonacci 61.8%. Ukubuyiselwa endaweni kubonisa ukuba i-UKX izonyuka iye kwinqanaba le-1.618 yeFibonacci eyandisiweyo okanye inqanaba 7283.32. Isalathiso siya kufikelela kwelo nqanaba ukuba ukuxhathisa kwaphuliwe.
I-UKX ikwinqanaba lama-53 lesalathiso samandla esihlobo. Ibonisa ukuba imakethi ikwindawo ephezulu kunye nangaphezulu komgangatho osembindini wama-50. Ii-SMA zeentsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 zithambeka ngokuthe tye zibonisa indlela esecaleni.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, i-FTSE 100 iyenyuka kodwa i-uptrend iphazamisekile. Imarike iqale kwakhona ukuhamba ecaleni. Ngeli xesha, ngoSeptemba 1 uptrend, umzimba wekhandlela obuyise umva kuvavanywa inqanaba lokubuyiselwa kwakhona kweFibonacci 61.8%. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba i-UKX iya kunyuka iye kwinqanaba le-1.618 yeFibonacci eyandisiweyo okanye inqanaba 7232.08. Imakethi iya kunyuka yongezwe i-Fibonacci ukuba uxinzelelo lwangoku luphuliwe.
Isalathiso singaphezulu kwoluhlu lwama-40% lwe-stochastic yemihla ngemihla. Iibhendi ze-stochastic zithe tyaba ngokuthe tye njengoko isantya sokunyuka soma. Iintsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 ze-SMAs zihlehla phezulu zibonisa uptrend.
I-FTSE 100 (UKX) ihamba ecaleni. I-UKX iya kuphinda iqhubeke inyukele phezulu ukuba ukunganyangeki kwinqanaba 7151 kwaphuliwe. Ukusukela ngoJuni, isalathiso besikwindlela esecaleni.
I-FTSE 100 (UKX) ikwi-Uptrend, inokuthi ijongane nokuchaswa kwinqanaba le-7200
I-FTSE 100 (UKX) ikukunyuka okuphezulu.
I-uptrend yamiswa kwinqanaba lama-7220. Ukusukela ngoMeyi, uxinzelelo oluphezulu kwinqanaba le-7200 alukophulwa. Namhlanje, abathengi batyhala ukuba baphinde baphinde baphinde baphinde bafumane inqanaba lokumelana nentloko. Ikhefu elingaphezulu kwenqanaba lokumelana liya kukhawulezisa ukunyuswa kwamaxabiso ngaphezulu. Okwangoku, ngo-Agasti 12 uptrend, umzimba wekhandlela ovavanyiweyo uvavanye inqanaba lokubuyiselwa kweFibonacci 61.8%. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba I-UKX Uya kunyuka uye kwinqanaba le-1.618 yeFibonacci eyandisiweyo okanye inqanaba le-7454.17.
I-FTSE 100 ikwinqanaba lama-54 le-Index yamandla ahlobene. I-UKX ikummandla we-bullish mkhuba kwaye ngaphezulu kwe-50. Iintsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 ze-SMAs zijike ngokuthe tye zibonisa imeko esecaleni.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, i-FTSE iqala phezulu. Abathengi batyhale ngaphezulu kwenqanaba lama-7200 kodwa abakwazi ukugcina amandla okonyusa amandla. Ngenxa yoko, isalathiso sayehlela kakhulu ezantsi. Ngeli xesha, ngo-Agasti 23 uptrend; umzimba wekhandlela ovavanyiweyo uvavanye inqanaba lokubuyiselwa kwe-Fibonacci engama-61.8%. Ukubuyiselwa endaweni kubonisa ukuba i-UKX iya kunyuka iye kwinqanaba le-1.618 yeFibonacci eyandisiweyo okanye inqanaba 7240.41.
Isalathiso singaphezulu kwe-80% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Isalathiso sikhuphukele kwingingqi ethengiweyo. Ukunyuka okuphezulu kuyathandabuza. Iimarike zikwisantya esiphezulu. Iintsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 ze-SMAs zihlehla phezulu zibonisa uptrend.
I-FTSE 100 (UKX) ukuya phezulu ayinakulindeleka njengoko intengiso ifikelela kummandla othengwe ngaphezulu. I-UKX sele ifikelele kwinqanaba eliphezulu le-7148 engaphantsi koxinzelelo oluphezulu. Kukho ithuba lokuba isalathiso sijongane nokwaliwa kwinqanaba le-7200.